ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ATM စာရင်း ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ATM စာရင်း - KBZ Bank kbz bank
April 7, 2021September 24, 2021
ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော မြို့ကြီးများရှိ ATM စာရင်းကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် ATM များကို အစဉ်အမြဲ online ဖြစ်နေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီး ငွေများ ဆက်လက်ဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးသတင်း အချက်အလက်များကို www.kbzbank.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံးစွဲသူ customer များအနေဖြင့် KBZ Connect အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော ကမ္ဘောဇဘဏ် ATM များကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Customer များသည် မိမိတို့နှင့်အနီးစပ်ဆုံးနေရာတွင် တည်ရှိနေသော ATM များသာမက ငွေသားထုတ်ယူနိုင်မှုကို ဖော်ပြပေးမည့် အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြစ်သော အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင် နှင့် အနီရောင် စသဖြင့်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစိမ်းရောင်သည် ATM တွင်ငွေသားအလုံအလောက်ရှိခြင်းကို ရည်ညွန်းပြီး အဝါရောင်သည် ငွေသားအတန်အသင့်သာ ရှိခြင်း နှင့် အနီရောင်သည် ငွေသားနည်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ရည်ညွန်းပါသည်။ KBZ Connect အက်ပလီကေးရှင်းရှိ အချက်အလက်များကို အချိန် မိနစ် ၉၀ တိုင်း အသစ်ပြန်လည် update လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
KBZ Connect အက်ပလီကေးရှင်းအား‌ ဒေါင်းလုတ်ရယူရန် (Android) – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kbzbank.kbzconnect&hl=en_IN&gl=US
KBZ Connect အက်ပလီကေးရှင်းအား‌ ဒေါင်းလုတ်ရယူရန် (iOS) – https://apps.apple.com/us/app/kbzconnect/id1465224459
လူကြီးမင်း၏ နားလည်ပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အတွက် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော ATM စာရင်း (ATM ပေါင်း ၁၆ ခုမှ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်)
ATM စာရင်းမှာ နေ့အလိုက်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် အိမ်မှမထွက်ခွာမီ အရင်ဆုံးကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးစေလိုပါသည်။
ATM Available in Yangon – September 24 (As of 11:00AM)
CITY EXPRESS SHOP 91
No 210 Kabar Aye Pagoda Rd, Yangon
THA KAY TA
No(1200-B),Min Nandar St, (2) North Qt, Thakata Tsp, Yangon.
Emporium Gem (Yangon)
Myanmar Jade Emporium Compund, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Tsop, Yangon.
WANHE GARMENT U2
NO-410,YGN-PYAY RD,3 QT,HMAWBI TSP
Central Fire Training Center
Pyin Oo Lwin Township, Zee Pin Gyi Village, Central Fire Training School, Mandalay-Pyin Oo Lwin Road.
ATM Available in Mandalay – September 24 (As of 11:00AM)
City/ Township Terminal Name Address
ATM Available in Naypyitaw – September 24 (As of 11:00AM)
OT TA RA THIRI
Ocean Nay Pyi Taw
Corner of Yazahtani St and Mandalay Road, Oakthayathiri Tsp, Naypyitaw.
ATM Available in Ayeyarwaddy – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Bago – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Chin – September 24 (As of 11:00AM)
Tee Tain Branch
Kan Hote St , Hlaing Bwar Blcok , TeeTain City , Chin State.
ATM Available in Kachin – September 24 (As of 11:00AM)
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY MYITKYINA,SHWE AIK QTR,MYITKYINA.
ATM Available in Kayah – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Kayin – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Magway – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Mon – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Rakhine – September 24 (As of 11:00AM)
ATM Available in Sagaing – September 24 (As of 11:00AM)
Htee Saung Hospital ( Myin Mu )
htee Saung village , Myin Mu- Monywar Road , Sagaing
ATM Available in Shan – September 24 (As of 11:00AM)
No(139), Thayapi St, Pa Tain North Qt, Thi Baw, Shan State (North)
LASHIO EDUCATION COLLAGE, NAMTU ROAD, QUARTER(11), LASHIO.
Kyine Tone Branch-2 1U
NO.(12)Kyine Lan Quarter ,NO.(1) Road ,Kyine Tone.
Kyine Tone Branch-2 2U
ATM Available in Tanintharyi – September 24 (As of 11:00AM)
ဘဏ်ခွဲများတွင်ရှိသော ATM များအပြင် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ customer များ ငွေသားထုတ်ယူမှုအဆင်ပြေနိုင်စေရေး ရွေ့လျား ATM များကိုလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထားရှိပေးထားပါသည်။ ‌‌ရွေ့လျား ATM နေ့စဉ်စာရင်းကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Mobile ATM list – September 24 (As of 11:00am)
MAYANGONE Kamayut Branch 1
MAYANGONE Uwizara Branch 2
MAYANGONE Sule Pagoda Road Branch
MAYANGONE Tamwe Arthawka Branch
MAYANGONE Tharkayta Branch
ဘဏ်ပိတ်ရက်ကြေငြာခြင်းရန်ကုန်မြို့ရှိ customer များအတွက် သီးသန့် ငွေသွင်းစင်တာ စတင်ဖွင့်လှစ်